ကွင်းယုန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ကွင်းယုန် (အင်္ဂလိပ်: Hare)
ယုန် ကို သာမန်အားဖြင့်သာ သိသူ များသည်။ တစ်မျိုးနှင့် တစ်မျိုးကို ခွဲခြား၍ သိသူကား နည်းသည်။ အမှန်မှာ ယုန် (၂)မျိုးရှိရာ တစ်မျိုးမှာ ကွင်းယုန် (အင်္ဂလိပ်: Hare) ဖြစ်၍ ကျန်တစ်မျိုးမှာ တွင်းယုန် (အင်္ဂလိပ်: Rabbit) ဖြစ်သည်။ ပါဏဗေဒအလိုအရ ကွင်းယုန် နှင့် တွင်းယုန် နှစ်မျိုးစလုံးသည် လပ်ပိုရီဒီး (Leporidae) မျိုးရင်းဝင်များဖြစ်ကြပြီး လက်ဂိုမော်ဖာ (Lagomorpha) မျိုးစဉ် အောက်၌ ပါဝင်ကြလေသည်။
ကွင်းယုန်သည် ယင်း၏ အမွှေးထူခြင်း၊ နားရွက်ရှည်ခြင်းနှင့် လျင်မြန်ခြင်းတို့ကြောင့် လူသိများသည်။ အမှန်မှာ ကွင်းယုန်သည် အလျင်မြန်ဆုံး တိရစ္ဆာန်ငယ်များတွင် ပါဝင်လေသည်။ ဘေးအန္တရာယ်နှင့် တွေ့ကြုံလျှင် ကွင်းယုန်သည် ယင်း၏ လျင်မြန်ခြင်းကိုသာ အားကိုးလေသည်။ ထိုနည်းဖြင့် ကွင်းယုန်သည် ရန်သူများ၏ဘေးမှ လွတ်ကင်းနိုင်လေသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကွင်းယုန်များကို တွင်းယုန်များအဖြစ် ပြောဆိုနေခြင်းသည် စင်စစ်အားဖြင့် မှားလေသည်။ ကွင်းယုန်ကို ကမ္ဘာအနှံ့အပြား၌ လိုလိုပင် တွေ့နိုင်သော်လည်း တွင်းယုန်ကိုမူ ဥရောပတိုက်တွင်သာ စ၍ တွေ့ရသည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် တွင်းယုန်များကို အခြားတိုင်းပြည်များသို့ သယ်ဆောင်သွားကြလေသည်။
၁ တွင်းယုန်နှင့် ကွဲပြားမှု
၂ သွင်ပြင်လက္ခဏာနှင့် နေထိုင်ပြုမူပုံများ
၃ စားလေ့ရှိသော အစားအစာ
၄ မျိုးပွားခြင်းနှင့် ဇီဝစက်ဝန်းလည်ပတ်ပုံ
၅ လူသားများနှင့် ပတ်သက်မှုဆိုင်ရာ
ကွင်းယုန်များသည် မကြာခဏ သားဖွားတတ်ကြသဖြင့် အပွားမြန်သည်။ ခြောက်လအရွယ်သို့ ရောက်လျှင် မိတ်လိုက်နိုင်သည်။ တစ်နှစ်တွင် နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ် သားမွေးနိုင်သည်။ မိခင်သည် ကိုယ်ဝန်ကို တစ်လသာ လွယ်သည်။ တစ်ကြိမ်မွေးလျှင် ယုန်ကလေး နှစ်ကောင်မှ ငါးကောင်အထိ မွေးတတ်သည်။ တစ်လ၊ သို့မဟုတ် နှစ်လကြာအပြီးတွင် ယုန်ကလေးများသည် ဘာသာဘာဝ နေထိုင်စားသောက်ကြသည်။
အချို့နေရာများတွင် ကွင်းယုန်တို့၏ သဘာဝရန်သူများဖြစ်သော မြေခွေး၊ မြွေပါမြီးတို၊ လင်းယုန်၊ သိမ်းနှင့် ခွေးတူဝက်တူများကို လူများက ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပေးကြသဖြင့် ကွင်းယုန်များသည် အတိုးပွား မြန်လာပြီးလျှင် စိုက်ခင်းများကိုပင် ဖျက်ဆီးပစ်ကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် အချို့နေရာများတွင် စိုက်ခင်းများ အတွင်းသို့ ကွင်းယုန်များ မဝင်နိုင်အောင် ခြံများကိုပင် ကာထားကြရလေသည်။ ဩစတြေလီးယားတိုက်ကဲ့သို့သော ကွင်းယုန်၏ အနှောင့်အယှက်ကို ခံကြရသည့် နေရာများတွင်မူ ကွင်းယုန်များကို ကျော့ကွင်းများ၊ ခွေးများနှင့် သေနတ်များ အသုံးပြုကာ ကာကွယ်ပေးကြရသည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်ရုံမျှနှင့် မရသေးလျှင် အချိန်မှန်မှန် ခရိုင်တစ်ခရိုင်အတွင်းရှိ ယောက်ျားကြီးငယ်များနှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် မိန်းမကြီးငယ်များသည် ကွင်းယုန်များ နေထိုင်သော နေရာများကို စတုရန်းတစ်မိုင်ခန့် တိုင်း၍ ကွင်းယုန်များကို ဝင်းခြံတစ်ခု အတွင်းသို့ မောင်းသွင်းပြီးလျှင် တုတ်ကြီးများဖြင့် ရိုက်သတ်ကြရလေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခါမျိုးတွင် တစ်နေ့တည်း၌ပင် ကွင်းယုန်ပေါင်း ၂ဝဝဝဝ ခန့်ကို ရိုက်သတ်နိုင်ကြလေသည်။
ကွင်းယုန်သားသည် ခပ်ထပ်ထပ်ဖြစ်သော်လည်း ထူးခြားသည့် အနံ့ရှိသဖြင့် လူကြိုက်များသည်။ ယုန်၏ အမွှေးများကို အထူးသဖြင့် ဆောင်းရာသီ၌ အရောင်ပြောင်းသည့် အမွှေးများကို အဖိုးတန်သည့် သားမွှေးတုအနေဖြင့် အသုံးများသည်။
တွင်းယုန်တွင် အရိုင်း နှင့် အယဉ် ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ ဇီဝမျိုးကွဲများအဖြစ် သိပ္ပံနည်းကျအတည်ပြုထားသည့် မျိုးစိတ် (၃၂)မျိုးမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
မျိုးစု သတ်မှတ်မှု မရေရာသေးသည့် မျိုးစိတ်များ
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ ၁.၆ ၁.၇ မြန်မာနိုင်ငံဘာသာပြန်စာပေအသင်း (၁၉၆၃)။ "ယုန်" (PDF)။ in စာပေဗိမာန် စာတည်းအဖွဲ့ (ed.)။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း။ ၁၁ (ပဌမအကြိမ် ed.)။ စာပေဗိမာန်ပုံနှိပ်တိုက်: စာပေဗိမာန်အဖွဲ့။
↑ Wilson၊ D.E.; Reeder၊ D.M., eds. (၂၀၀၅)။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသော နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များ: မျိုးရိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် ပထဝီမြေမျက်နှာပြင်ဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းကျမ်း (တတိယအကြိမ် ed.)။ ဂျွန်ဟော့ကင်းတက္ကသိုလ် ပုံနှိပ်တိုက်။ pp. 195–205။ ISBN 978-0-8018-8221-0။ OCLC 62265494။
↑ Database၊ Mammal Diversity (2022-02-01)၊ Mammal Diversity Database၊ Zenodo၊ 2022-03-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကွင်းယုန်&oldid=743307" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၄:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။